-गुरुआमा हङकङ कस्तो लाग्यो ?
इन्द्र सर, कहिले काँही लेख्न छाड्छु त भन्नु हुन्न ?
किन जानु हुन्न ?
दार्जिलिङसँग रिसाउनु भएको त होइन ?
गुरुआमा तपाई कति वर्ष पुग्नु भयो ?
गुरु चाँहि कति वर्ष पुग्नु भयो ।
गुरु गुरुआमा तपाईहरु त तगडा हुनुहुँदो रहेछ नी ?
- हजुर बलियो छौं
गुरुआमा अब हामी त त्यति बाँच्दैनौ होला ?
गुरुआमा होइन हाम्रोलागि अरु बाँच्नु परेको छ, तपाईहरूले ?
गुरुआमाले बिहे कहिले गर्नु भएको हो ?
यत्रो ६१ वर्षगुरुसँगै हुनुहुँदो रहेछ जहिल्यै साहित्यको कुरा सुन्दा सुन्दा तपाईलाई दिक्क लागेन ?
अनि काठमाण्डौतिर जाँदा पनि सँगै जानुहुन्छ ?
अनि मागी विवाह गर्नु भएको हो की ?
गुरुआमा तपाईहरुको प्रेमसम्वन्ध इन्द्रसरसँग भएको पनि यति लामो भएछ । कस्तो लाग्छ नी तपाईलाई ?
होइन गुरुआमा उता दार्जिलिङ तिरकाले इन्द्रसरलाई वेवास्ता गरेजस्तो लाग्दैन ?
भारतका अन्य ठाउँका नेपालीहरु आएर सरलाई नेपाली भाषाकोलागि सरसल्लाह माग्न आउँछन् कि आउँदैनन् ?
अनि गुरुआमा हामीलाई हङकङमा देख्दा कस्तो लागिरहेको छ ?
गुरुआमा हङकङ आउँदा छोराछोरीले फोन गरे त ?
अनि गुरु र गुरुआमा प्राय तपाईहरु कहाँ बस्नु हुन्छ ?
गुरुलाई लेख्ने समय कति बेला छुट्याउनु हुन्छ ?awaw
खानापिन कसले दिन्छ ?
साह्रै माया गर्नु हुँदो रहेछ ?
गुरुआमा केही दुःख छ ?
दार्जिलिङमा नेपालीलाई केही दुःख छ की ?
गुरुआमा हाम्रो इन्द्र सरलाई गोर्खाल्याण्ड देख्छु जस्तो लागेको छ की छैन ?
अनि सरले सम्झाउनु हुन्न ?
पवन चाम्लिङ पनि आउनु हुन्छ की गुरुलाई भेट्न ?